Apg29 - (MG) | Apg29
904 online! | Sidvisningar idag: 19 684 | Igår: 162 965 |
Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana
Mpamaky Mail amin'ny Katty
Tsapako fa tsy maintsy mivavaka ho an'ireo niharam-boina, izay efa nafindra toerana an-tranony avy. Fa izy ireo hahalala an'i Jesosy, ary manana fifandraisana manokana aminy, izy ireo dia voavonjy!
Forest doro - ny didim-pitsaran'Andriamanitra an'i Soeda?
Comment amin'ny Rune Johansson
Amin'izao fotoana izao miatrika Soeda miely patrana sy sarotra ny hamono doro ala. Ny ankamaroan'ny mpanoratra misintona izany ho an'ny Tompo ankehitriny manasazy antsika noho ny asa maha-firenena azy. Andeha isika haka fomba fijery ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao.
Lay mahery fivoriana in Jättene
Pikantsary: falkopingstidning.se .
Tamin'ny fivoriana roa, dia nitsidika ny trano-lay fivoriana in Jättene. Taorian'ny fihaonana voalohany hariva ny niely haingana ny fomba tsara dia ny manaraka feno hariva fiangonana, dia ny olona.
Maro fandoroana ao amin'ny lehibe indrindra ny doro ala tany Soeda
Nandritra ny indray andro no 15 afo no zaridaina tao Arboga. Ary ny afo izao rehetra vaika ny ratsy indrindra any Soeda loza afo dia toy izany no tsy manana ny vokatry ny antony voajanahary.
Ahoana kosa ny amin'ny Pentekotista hetsika?
Mpamaky Mail amin'ny Sigvard Sabatra
Mazava ho azy ny tantara rehetra mahatsiaro tena sy liana Pentekotista ara-Baiboly, ny Pentekotista hetsika hatrizay naha Pentekosta FFS sy Society Pentekosta, ny fanao isan-taona antsoina hoe ny filan-kevitra - niova na ny fandaminana, piarahamonina sy ara-teôlôjia.
Telo fivoriana ny Vata in Kungsangen
Nenne Lindberg, Toye Josefsson, Martin Lindberg sy Christer Åberg mitsidika ny Vata tamin'ny 3 fivoriana ny roa andro. 14:00 sy 19:00 tamin'ny Talata 17 Jolay sy ny Alarobia, 18 Jolay amin'ny 10:00.
Support Apg29 miaraka amin'ny fanomezana an-tsitrapo
Afaka manohana Apg29 tamin'ny fomba telo.
Ny vola hetra dia Famatsiam-bola Imam fiofanana
Mpamaky Mail amin'ny Bertil Rosenius
Ny lohateny lehibe tao amin'ny Facebook naniraka te hahafanta-javatra: "Ao amin'ny fararano, Soeda no voalohany vatsian'ny fanjakana Imam fampianarana." Marina sa diso? Marina! Fa izany rehetra izany dia tonga ratsy kokoa, rehefa mitsoraka ho tantara!
Loza fiovana mazava ho azy - Part 1
Ny fanovana Mazava ho azy ankehitriny natao momba ny fanambarana an'i Jesosy ho avy, io no mety vokany manimba.
Almedalen - Dance sy Trams sy ny tafatafa niarahana tamin'ny Christer Åberg
Film Group Atsimbadiho ny Flop nanadihady ahy in Almedalen 2018th
Efa nanadino na inona na inona isika?
"Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra," Salamo. 103: 2
mandrara ny Pride
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia ahitana sary mahafinaritra avy amin'ny Pride fety.
Add marika ny ankizy mahita izany fampisehoana ...
Tsy azo avela ary tokony mandrara ny olona ny rafitra samy hafa, fa izy ireo dia afaka mandrara ny dia fa hananatra azy eny an-dalana.
Ny faminanian'i Joela sy ny vonjy taitra famonoana ao amin'ny hain-tany soedoa
Nisy namaky ny Baiboly. Ary rehefa tonga tany ity andininy ao amin'ny Joela 1: 17-19:
Ny farany dia ny papa Antikristy - Faminanian'i teo aloha Alberto Zezoita Rivera
Ny Katolika teo aloha Alberto Zezoita Rivera maminany amin'ny 1990 fa ny Katolika Romana farany papa no ho Baiboly antikristy.
Ny fanavotana ny ankizilahy ao Tham Luang Cave
Ny ankizilahy in Tham Luang Cave.
Tsy noho ny na inona na inona, mihevitra aho fa ny lehibe andinin-Salamo 40: 3, izay momba an'i Jesosy mamonjy avy amin'ny lavaka fandringanana Izy rehefa tonga ny tatitra momba ny fanavotana asan 'ny roa ambin'ny folo lahy sy ny baolina kitra mpanazatra in Tham Luang Cave in Thailand.
Jimmie Åkesson mby vahoaka be in Almedalen
Soeda mpitarika antoko Demokraty Jimmie Åkesson mby vahoaka be tany Almedalen, fony izy niteny tamin'ny Asabotsy alina.
Almedalsveckan, ny Soeda Demokraty sy ny sisa 'Andriamanitra
Christer Åberg velona farany lahatsary avy any Almedalen. Soeda Demokraty, Jimmie Åkesson sy fitsaharan'Andriamanitra.
Vecka 30, måndag 23 juli 2018 kl. 02:19
Dia hitory ny teny
Inona no nangataka ny Fivoriambe rehefa niangona izy?
Sary an'i Almedalen sy Elida Talata 3 Jolay, 2018
Ary ny sasany sary avy amin'ny sambo Elida amin'ny Almedalen Week in Visby ny Talata, Jolay 3.
Daniela Persin, fantsona mpitantana amin'ny TV7 an-danitra.
Christer ny tatitra Åberg Almedalsveckan
Avy amin'ny trano-lay kely amin'ny Gotland manome Christer Åberg tatitra ity eo amin'ny fahatsapana sy ny zavatra niainany ny Almedalsveckan 2018th
Ratsy bala afomanga tsy afaka hitondra antsika hody Jesosy
Tamin'ny 30 Jona, Japoney balafomanga nirahiny ho toerana, fa efa teo am-piandohan'ny doza izany ho nankarenin-tsofina, fipoahana.
Mr. mihamangatsiaka aoka Fuck ankizy dia avy amin'ny Devoly
Tao amin'ny haino aman-jery sosialy nanasongadina efa telo taona iray hira antsoina hoe Fuck ankizy. Eny, izany foto-kevitra momba izany indrindra, ary izany no antsoina hoe vazivazy. Tsia, izany dia avy amin'ny devoly sy ny demoniany. Teny kely maharikoriko kokoa dia tena sarotra hita.
Ankehitriny dia mitsidika Gotland sy Almedalsveckan fotoana voalohany teo amin'ny fiainako
Faniriana sy ny zanako vavy aho Christer Åberg.
Rahampitso aho handeha ho any Gotland nandritra Almedalsveckan. Io no fotoana voalohany aho teo amin'ilay nosy. Hatramin'ny aho mbola zazalahy kely, dia nanonofy ny indray andro ny fandehanana any amin'ny nosy.
Stefan Löfvens fanambarana diso
- Raha toa ianao ka miasa toy ny mpampivelona dia tsy maintsy ho afaka hanatanteraka fanalan-jaza, raha tsy izany dia tsy maintsy hanao zavatra hafa. Dia iray ihany izany ho an'ny mpisorona izay tsy te-hampaharitra ny mitovy taovam-pananahana, hoy ny Praiminisitra Zavatra Stefan Löfven.
Horohoron-tany lehibe roa any Soeda tao anatin'ny andro vitsivitsy
Fa fanindroany tao anatin'ny andro vitsivitsy, nisy horohoron-tany mafy namely an'i Soeda. Ny horohoron-tany tao amin'ny fialan-tsasatra Sangis, kely atsinanan'i Kalix. Indray mandeha indray isika dia mahatsiaro ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Baiboly.
Ny ankizy mianatra ny yoga, ary ry zareo ao amin'ny saka maitso Regnbågsplaneten
Ankizy from dimy ny iraika ambin'ny folo taona no nampianarana ny yoga, ary anisan'izany mody izy ireo saka maitso izay nonina tany Regnbågsplaneten.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 430 452 403 sidvisningar på Apg29!